Cishe abaningi baye bezwa okuningi ukuphumelela izidakamizwa "Prospan", futhi akuyona kuphela inani ukukhangisa imikhankaso. Umuthi ingabe Ziningi izinzuzo kwemithi futhi zingakwazi ukubhekana nazo ngokuphumelelayo ngisho abanezifo eziyinkimbinkimbi yaleli pheshana zokuphefumula. Kodwa nansi Analogue we "overslept" kunemiphumela ezifanayo futhi ephephile ukuze isiguli, zama ukuqonda.
Kwemithi isinyathelo ejenti "Prospan"
Ngesisekelo izidakamizwa mucolytic kuyinto akhiphe ezomile amaqabunga ivy. Kuyinto ngokusebenzisa le ngxenye zamanje has ejenti antitussive, futhi sekretoliticheskoe isinyathelo mucokinetic. Ngaphezu kwalokho, ukuba khona saponins ku akhiphe ivy kwenza kube nokwenzeka ukukhulula imisipha abushelelezi bronchi. Ngamanye amazwi, lo izidakamizwa kunomphumela spasmolytic. Ngenxa leli banga enemisebenzi isinyathelo zomuthi liphumelele Izifo ukuvuvukala yaleli pheshana zokuphefumula ahambisana ukukhwehlela syndrome eqinile kanye kumiswa isikhwehlela viscous.
Enye inzuzo yokuhamba kwesikebhe izidakamizwa ukuthi ayithinti le sezinzwa uhlelo ukulawulwa kwezimila. Iqukethe ulwazi oluthe xaxa ngokwenziwa isenzo kwemithi zomuthi "Prospan" imfundo manual. Analogue izidakamizwa ezihlukene kakhulu kanye nezici, ngakho ngaphambi kokuthatha okusemandleni abo ukuze bonana nodokotela wakho kuqala.
Izinkomba kanye nefomu ukukhululwa kwe-nomuthi "Prospan"
I nomuthi iqondiswa iziguli uxilongwe izifo ezifana bronchial isimiso syndrome, ukucinana kwemigudu yokuphefumula oyingozi noma ezingamahlalakhona, isifuba somoya kanye nezinye izifo umgudu wokuphefumula nokuba omsakazo ukuvuvukala. Umuthi kunomthelela liquefaction ka isikhwehlela futhi isuswe.
Yabela it njengoba iziguli omdala, futhi imvuthu kusukela ekuzalweni. Nokho, izidakamizwa kuqala Kunconywa ukuba isetshenziswe ngendlela amaphilisi effervescent, kodwa izingane kungcono ukusebenzisa izidakamizwa ngesimo usulubha omnandi wezithelo. Kufanele kuphawulwe ukuthi iyiphi Analogue "overslept" izingane ezinqunyiwe ewuketshezi. Akukona nje kuphela indlela ukubala umthamo kuncike yobudala ingane, kodwa futhi kusiza kokungenisa oqondile imithi.
imithi tekukhipha uhlelo kanye nemithetho yokuvuma
I nomuthi ngesimo amaphilisi effervescent zingafundwa neziguli iminyaka 4 ubudala. Ukuze wenze lokhu, umthamo kuvunyelwe zomuthi ziyoncibilika 1 inkomishi yamanzi. Kungcono, yebo, uma isiphuzo iyashisa, izonikeza i ukwanda isinyathelo antispasmodic. Kodwa uma ingane enqaba ukuthatha imithi ngisho ngesimo ukushisa, ingasetshenziswa ukupheka namanzi abandayo. iziguli kabani, jaha yobudala - kusukela eminyakeni 4 kuya ku-12, odokotela bavame yokwelapha ½ amaphilisi kathathu ngosuku. Ezinganeni abaneminyaka engama 12 kanye nabantu abadala izincomo kancane ezahlukene. Leli qembu iziguli kufanele uthathe 1 ithebhulethi kabili ngosuku. Kungakhathaliseki bohlanga ubudala, okuyisikhathi sokwenza indlela yokwelashwa udokotela usetha. Nokho, ukuze sifinyelele umphumela oyifunayo, le nkathi kufanele kube okungenani izinsuku ezingu-7.
Ngokuphathelene izindlela ngesimo isiraphu, lo omdala kumele silisebenzise ngo 7.5 ezintathu ml izikhathi ngosuku, izingane 6 kuya kwengu-14 - 5 ml ne isikhawu efanayo, kodwa imvuthuluka azifinyelelanga eneminyaka eyisithupha Ketha kufanele ulinganise ku 2.5 ml. Kufanele kuqashelwe ukuthi iyiphi Analogue "overslept" izingane ngesimo isiraphu has kudivayisi nokushintsha kokudla nokufakwa eqondile imithi. Kungaba imijovo ekhethekile, amakepisi, izinkomishi nezinkezo wokulinganisa.
Izimo futhi imiphumela engemihle yemithi
Ngenxa plant-based ukusabela ezingezinhle babonakala e seziguli ezithola izindlela "Prospan". Analogs ishibhile, kuyafaneleka, kukancane inzuzo enjalo, kanye nohlu Izimo angaphezu kakhulu. Kepha imali "Prospan", bese it is hhayi Kunconywa ukwamukela iziguli kuphela ukungabekezelelani ngakunye izingxenye umuthi. Abesifazane abakhulelwe nabancelisayo imithi engcono esetshenziswa ngaphansi kweso lwezokwelapha, nakuba umuzwa basemtholampilo izidakamizwa umonakalo ezingenzeka embungwini noma umntwana ayisethelwe.
Bezakhiwe analogue kwezimali "Prospan"
Yisho ukuthi Ivy isitshalo okwelapha, futhi sekuyisikhathi eside esetshenziswa yesintu imithi, mhlawumbe akudingekile. Kodwa nansi ngijwayele izidakamizwa, okwa- kwenziwa ngesisekelo ingxenye isitshalo, kuyakufanelekela. Phela, njengendlela yokuthola "Prospan" analogs kancane esekelwe ivy aphumelele izifo ezihlukahlukene ukuvuvukala umgudu wokuphefumula, ephelezelwa ukukhwehlela futhi yakha isikhwehlela viscous. Lezi zihlanganisa imithi efana "Gedeliks", "Gerbion" (ivy isiraphu), "Pektolvan ivy", kanye akhiphe owomileyo ube yiziphethu ivy oluhlaza. Ngayinye yalezi izidakamizwa jwayelana kabanzi, ukuqonda lokho abanakho ngebuhle nebubi.
Lokhu Analogue "overslept" futhi iveza zisuselwa akhiphe amaqabunga ivy, kodwa izingxenye asizayo zihlukile kuye ukuma ukukhululwa izidakamizwa. Ukuze kunodokotela wasebenzisa amathonsi Peppermint uwoyela, zikagamthilini kanye aniseed, propylene glycol, levomenthol. Kodwa nezinsizasenzo isiraphu kuthiwa amanzi, isixazululo sorbitol, uwoyela anise nezinye izithelo hlamba.
Enikezwa imithi njengenhlangano expectorant for izifo zemigudu yokuphefumula, ephelezelwa ukukhwehlela enobudlova futhi isikhwehlela trudnootdelyaemoy. Uma udokotela okwelaphayo alikukhuthazi ngabanye nokushintsha kokudla nokufakwa lwemithi, amathonsi kufanele kuthathwe ngemithamo elicacisiwe yokusetshenziswa. Kiddies kusukela eminyakeni emi-2 kuya ku-4 ubudala kudingeka baphuze 16-48 sehla kathathu ngosuku ngemva kokudla main, ukuphuza amaningi imithi uketshezi. Iziguli ezingazweli ku-eqenjini oneminyaka engaphansi kwengu-4 kuya ku-10, watusa umthamo owodwa we-21-63 amathonsi, kodwa akunjalo ngeziguli kuka-10 eminyakeni ukhombe 31-93 amathonsi.
Ngokuqondene isiraphu "Gedeliks", ingasetshenziswa ukwelapha ukukhwehlela ezinganeni kusukela ekuzalweni. Nokho, kuwufanele ukukhumbula ukuthi, njengoba izidakamizwa "Prospan" nozakwabo kumele aqokwe uchwepheshe ngubani ngeke abale umthamo isiguli ngokusekelwe ebucayini kanye nohlobo isifo. Kusho "Gedeliks" iyathinteka, ikakhulukazi uma kuziwa ekwelapheni izinsana nezingane.
Izidakamizwa "Pektolvan ivy"
Lokhu Analogue "overslept" iqukethe akhiphe amaqabunga ivy, ngakho-ke cabanga impahla yayo kwemithi futhi akudingekile. izidakamizwa Itholakala kuphela ngesimo isiraphu, 5 ml aqukethe 35 mg isithako esisebenzayo.
Tinkondlo iziguli sibi zokuphefumula ipheshana izifo ukuthi ahambisana ukukhwehlela. Libuye ngempumelelo ekwelapheni pathologies ezehlukene bronchial omsakazo ukuvuvukala. Nokho, ngokungafani izindlela "Prospan" Lokhu nomuthi inezici ezithile emihle nemibi.
I yokuntula kukhona ukuthi izidakamizwa ngeke isetshenziswe ekwelapheni izingane ezingaphansi konyaka. Ngaphezu kwalokho, isicelo kusho ezimweni ezingajwayelekile kungabangela eziningi side ukusabela ezifana ukuqubuka kwesikhumba, ukuhlanza, ukukhishwa isisu kanye nesicanucanu.
Kodwa izimfanelo zomuthi akunakubangelwa izindleko zalo ongaphakeme.
nomuthi Active, kanye nazo zonke izidakamizwa ezifana nalezi ezichazwe ngezansi akhiqizwa uhlobo isiraphu. It ezinqunyiwe nezifo zokuphefumula ukuthi une-omsakazo ukuvuvukala. Futhi, kungenzeka indlela esetshenziswa njengendlela yokukwenza lingaze ngoba pathologies ezingamahlalakhona bronchi.
Njengoba ngesisekelo analogu "overslept" iqukethe ivy leaf akhiphe ke indlela yokubhekana ngokuphumelela ne ukukhwehlela futhi ikhuthaza liquefaction nokuhlukaniswa isikhwehlela. Yabela ke Kiddies ngesikhathi sokuzalwa, kodwa uhlelo nokushintsha kokudla nokufakwa usungula kuphela udokotela, kanye isikhathi sokwelashwa.
Uma udokotela ebekiwe isiraphu "Prospan" analogue, kakhulukazi, okusho "Gerbion" kumele kusetshenziswe awuwedwa. Empeleni, lo muthi kungadala imiphumela emibi ezifana ukuqubuka kwesikhumba noma ukulunywa, ububomvu we epidermis kanye nolwelwesi lwamafinyila, kanye isicanucanu, ukuhlanza, futhi ukuhlukumeza kwesitulo.
Analogs "Prospan" ukulungiselela izingane
ububanzi yanamuhla kwemithi ezihlinzekwa Pharmacy ukwenza kube lula ukuthola futhi uthenge indawo yimuphi izidakamizwa. Nokho, uma sikhuluma impilo yengane yakhe, kuwufanele ingozi? Impendulo isobala. Futhi uma udokotela wakho ekunike imvuthu izidakamizwa "Prospan" analogue eshibhile yedwa Akudingekile ngempela ukuba ukhethe. Lokhu kungaba yingozi kakhulu imvuthuluka. Uma thina nganoma yisiphi isizathu ukuthenga lesi sidakamizwa "Prospan" akunakwenzeka, kufanele uxhumane nodokotela wakho. Lo chwepheshe uzokwazi ukukhetha ephephile futhi ngesikhathi esifanayo imithi ngempumelelo.
Uma imvuthu kukhona contraindicated ivy akhiphe, futhi ngokufanelekile, isiraphu "Prospan" kumakhophi, enganikeza udokotela wezingane sizoqukatha nezinye izingxenye, futhi akusizi ngalokwentekako kwemithi.
"Enterosgel": nozakwabo. "Polisorb" noma "Enterosgel" - okuyinto engcono? Izibuyekezo
Amakhambi sokulala ukuqwasha: uhlu izindlela ukulungiswa kanye nokubuyekeza
Umbuzo obalulekile-ke umlumbanisi isikhathi sokutshala Tulips?
Yini uphethwe "candidiasis vulvovaginal"? Yiziphi izimpawu zayo nendlela aphatha ngayo?